Zvaunofanira kuita kana uchinge watarisana nehusiku kubiwa paInternet | ECommerce nhau
Zvekuita kana watarisana nechitupa chekuba
Nhasi tichataura nezve kuba chitupa, kubva mukati mepasirese pasirese ye e-commerce pane nzira dzakasiyana dzekushambadza senge masocial network, simba rakasimba pazvisarudzo zvazvino zvekutenga nekutengesa zvigadzirwa nemasevhisi.
Nguva zhinji mukati memanetwork aya, kune vanhu vanonyepedzera kuva mumwe, kuwana chigadzirwa kana sevhisi panzvimbo yemubati uyo asingazive zviri kuitika, saka chitupa kubiwa inyaya yazvino inoda kugadziriswa.
2 Vanotevedzera chii?
3 Ndedzipi nzira dziripo dzekutevedzera munhu?
4 Ndedzipi nzira dziripo dzekutevedzera munhu?
5 Nzira yekuderedza sei njodzi yeruzivo kubiwa?
5.1 Kuti uderedze zvakanyanya njodzi yekuparadzwa online, heano mamwe matipi.
6 Chii chekuita mune chiitiko chekuba chitupa?
Dambudziko razvino uye utsotsi muzviitiko zvakawanda kuba chitupa, kungave muemail yako, nemasevhisi kana zvigadzirwa zvakatengwa online kana pane ako masocial network. Kugadzirisa izvi, zvinokurudzirwa kuti iwe uverenge ichi chinyorwa kusvika kumagumo, hezvino makuru spoofing kesi uye maitiro ekuzvidzivirira.
Kuteedzera kuri kuita semumwe munhu paInternet kuti aite zvisiri pamutemo.
Kunyange zvakadaro zvikonzero zvinosiyana kazhinji, nyaya yakajairika ndeyekushatirisa kana kuziva chimwe chinhu nezvemunhu akateedzerwa. Izvi zvinoitwawo Kuita zvisiri pamutemo kugadzira profiles kuita chitsotsi chekutengesa panzvimbo yechitatu mapato.
Nzvimbo yakajairika kunoitwa kuteedzera uku iri mu main social network sezvo ini ndichiwana yese ruzivo rwemunhu wemunhu chaiyo iri nyore kwazvo uye iri pedyo, pamwe ne gadzira mbiri yekunyepera nemifananidzo yakabiwa kutevedzera iye munhu.
Nezve chimiro chevanhu vanowanzo vakaurayiwa nekutevedzera, Ivo kazhinji vanhu vane ruzivo rwako rwega senge zita uye zita rezita, zuva nenzvimbo yekuzvarwa, mifananidzo, nezvimwe. Mune yeruzhinji pasocial network, ndiko kuti, usadzora kuti ndiani anokwanisa kuwana iyi data. Zvakajairika kuti vanhu vafunge kuti izvi zvinongoitika kuvanhu vevanhu vakadai sevatambi kana maartist, manyepo, chero munhu anogona kubiridzirwa.
Ndedzipi nzira dziripo dzekutevedzera munhu?
Kuwana zvisiri pamutemo iyo account. Nenzira iyi, mutadzi anofanira kuwana kodhi yekuwana inoenderana neanotambudzwa, kungave nekuifungira, kuburikidza ne phishing, kana imwe mhando yemarware kuti uwane.
Kugadzira nyowani uye yekunyepedzera mbiri, neruzivo rwakazara kana rusaruro rwemunhu akateedzerwa. Izvo zviri nyore kupfuura yekutanga, uko tsotsi rinongofanira kusarudza munhu akabatwa, kuunganidza ruzivo rwavo uye kugadzira chimiro.
Kugadzira chimiro chenhema kutora chinzvimbo chemunhu chero upi zvake imhosva inotyora kodzero yemufananidzo wemunhu sekutaurwa kwazvakaitwa muchinyorwa 18 chebumbiro reSpain, kuwedzera kune icho chinyorwa 401 chekodhi yechirango chinosimbisa kuti iwe unogona kuenda kujeri nekuda kweizvi zvisiri pamutemo.
Famba imwe account yemumwe mushandisi. Chokwadi ichi chinotaurwa nekuti chinorwisa zvakavanzika zveiye akabatwa, uye mupari wemhosva anotambira mhosva mbiri, yekupinda muaccount zvisiri pamutemo uye yekuwana password zvisirizvo.
Kugadzira nhoroondo nyowani uye yenhema, iine ruzivo rwakazara kana rusaruro rwemunhu akateedzerwa. Izvo zviri nyore kupfuura yekutanga, uko tsotsi rinongofanira kusarudza munhu akabatwa, kuunganidza ruzivo rwavo uye kugadzira chimiro.
Kugadzira nhoroondo yenhema kutevedzera chero munhu imhosva iyo inotyora kodzero yemufananidzo wako sekutaurwa kwazvakaitwa muchinyorwa 18 cheSpanish Bumbiro, pamusoro pekuti chinyorwa 401 chemutemo wekuranga chinosimbisa kuti iwe unogona kuenda kujeri nekuda kwemhosva iyi.
Nzira yekuderedza sei njodzi yeruzivo kubiwa?
Kuti uderedze zvakanyanya njodzi yekuparadzwa online, heano mamwe matipi.
Uchishandisa mapassword akaomarara kuti uwane iyo nhoroondo yesocial network. Iwe haudi pasiwedhi refu, asi chimwe chinhu chinoshanda kuwedzera kuoma kwekuiwana kuisa mabhii makuru nemavara madiki uye nhamba.
Ziva chinonzi phishing. Iyi tsika yakajairika inosanganisira kutumira vanobatwa, maemail kana mameseji nedzimwe nzira, vanokumbira kusimbisa chimiro chesaiti pasocial network yavanoda kuwana password yako, pasi pechikonzero, kuitira kuti iwe upinde iyi link ku simbisa account yako uye nekudaro, tsotsi rinowana ruzivo rwako uye password.
Gadzira yako yega mbiri ive yakavanzika sezvinobvira, nekudaro kudzivirira vashandisi vasingazivikanwe, zvachose kunze kwenzvimbo dzako dzehukama, kubva mukuwana ruzivo rwako. Chinhu chekufunga nezvacho kana iwe uchigamuchira shamwari, kutanga pane zvese, tarisa vanhu vavanoziva zvakafanana, uyezve kuyedza kutsvaga kuti sei ndichiwedzera iwe kana nechinangwa chei kana ivo vasingazivane pachavo.
Usagovana wega mapikicha kana mavhidhiyo. Matsotsi anotsvaga izvi zvirimo vobva vatora mari kubva kune vakawirwa pasi pefungidziro yekuti kana vasingaite zvinodiwa zvakatemwa, vanozozivisa ruzivo urwu.
Wongorora zvirevo zvebasa uye zvakavanzika marongero yemapeji atinovapa mukana wekuwana kubva kuaccount yedu, kuti vazive zvavanogovana yako data, kuti vanozovabata sei uye kana vakagovaniswa nevechitatu mapato, nezvimwe.
Kana hunhu hwekubira hwaisanganisira iro zita chete, pasina mapikicha kana rumwe ruzivo, zvinogona kudaro zita uye iwe haugone kutora chero danho repamutemo.
For the Kana iyo nhoroondo ikashandisa pikicha yedu kana data redu, chiito chisiri pamutemo chingave chiri kutora nzvimbo.
Maitiro aya anorangwa nechinyorwa 401 chePenal Code, semhosva yekuba chitupa, nemutongo wetirongo wemwedzi mitanhatu kusvika kumakore matatu.
Chii chekuita mune chiitiko chekuba chitupa?
Chekutanga pane zvese, unofanirwa tsvaga iyo fake mbiri, Mune social network mairi, muenzaniso Facebook inokutendera kuti utaure nekuda kwezvikonzero izvi, saka zvakakosha kuti zvisaramba zvichishandisa ruzivo rwako.
Unogona faira kunyunyuta kwako neHurumende Kuchengetedza Mauto neMitumbi (FCSE). Iwe unofanirwa kupa humbowo hwekuti uri sei akabirwa chitupa. Kuve neichi chiratidzo cheizvi, chengetedza imwe skrini yeiyo fake mbiri, pamwe neruzivo irwako uye rwuri kushandiswa zvisirizvo.
Kunyorera Izvo zvinogona kuitika kune chero munhu, zvisinei kana aine profiles pasocial network kana kwete. Neichi chikonzero, isu tinofanirwa kupota tichitsvaga zita redu rizere kuti tizive izvo zvinoburitswa paInternet nezvedu uye nei.
25% yevaSpanish vane maakaundi pasocial network, vanozviti vakambopara mhosva iyi pane imwe nguva.
Zvisinei, Iwe haufanire kunge uine mukurumbira kuti unangisirwe nehunyengeri. Semuenzaniso, nyaya yemukadzi wechidiki akabirwa chitupa chake kuti aite chimiro panzvimbo yekufambidzana uye kufambidzana nevamwe varume vakamumiririra. Kune zvekare zviitiko zvekuteedzera pamberi pechikwereti masangano, kadhi kuumbika uye kunyangwe mune rejista registry.
Faira kunyunyuta kwako nenzvimbo yepamutemo: Iyo nguva yatinoziva nezve chiito chisiri pamutemo, iwe unofanirwa kuenda kunzvimbo yekufungidzira mhedzisiro inogona kuitika.
Kumbira kubhadhara chikwereti: Kana semhedzisiro yekuba chitupa uri kudiwa kuti ubhadhare mari isingaitwe, unogona kukumbira pamberi pevatengi Arbitration Boards. Iwe unogona zvakare kuita chichemo kuTerecommunications Mushandisi Webasa Hofisi.
Enda kumunhu akagadzira chikwereti kuti ubvise: Muchiitiko chekuti munhu akabatwa anoziva kuti data ravo rakabatanidzwa mufaira rekuramba kwekuramba kubhadhara chigadzirwa kana sevhisi yavasina kutenga, vanofanirwa kuenda kukambani kana munhu anovapomera achida kubviswa kwechikwereti chavo, pamwe nekubviswa kubva pane zvambotaurwa, zvichikupa kopi yehumwe humbowo hwekutevedzera.
Zvinyorwa: Kana mugari akasarudza kuzivisa kubirwa chitupa, zvinodikanwa kutakura zvese zvinyorwa zvinoratidza chigadzirwa kana sevhisi ine kondirakiti iri kutaurwa, zvichiratidza nhamba yakabatana yeakaundi uye nekuwedzera kopi yakanyorwa yekuda iyo yakatumirwa kukambani. Izvo zvakakosha zvakanyanya kupa kopi yeinvoice yechigadzirwa kana sevhisi inobatanidzwa muchiitiko.
Kuzivikanwa kwemazita idambudziko rakakura munharaunda, iyo inoshingairira kurwisa vanhu vese, pasina mutsauko werudzi, dzinza kana chitendero, Internet, nekuve yakavhurika network, zvakare inobvumidza kupinda kwevanhu vane kuda kwakashata, saka tinofanirwa kugara tichichengetedza ruzivo rwedu, uye pamusoro pazvose kuti uzive zvakanaka uyo watiri kumupa, nekuti mazuva ano mashoma mawebhusaiti akavimbika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Zvekuita kana watarisana nechitupa chekuba
Matipi uye nhungamiro yekuti ungatanga sei bhizinesi
Maitiro ekuzvinyora kubva paFacebook